जनकपुरधाम । कोरोना संक्रमणबाट मधेश प्रदेश थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
विरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारत दुई जना संक्रमितको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो । योसँगै मधेश प्रदेशमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुने एक हजार ५१ पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालय कार्यालयले जनाएको छ ।
नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका बारा कलैया उपमहानगरपालिका –५ की ६५ वर्षीया संक्रमित महिलाको शनिबार बिहान साढे ७ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. उदयनारायण सिंहले बताए ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि महिला शुक्रबार अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । सोही दिन एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती महिलाले कोभिडविरुद्धको खोपको दुवै डोज लगाएकी थिइन ।
त्यसैगरी, नारायणी अस्पतालमै उपचारत वीरगन्ज महानगरपालिका–३ का ७३ वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि शनिवार बिहान मृत्यु भएको छ । अस्पतालको आइसियु कक्षमा भर्ना गरेर भेन्टिलेटर सपोर्टमा उपचार गर्ने क्रममा शनिवार बिहान साढे ४ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सिंहले जानकारी दिए । ती पुरुषले पनि कोभिड विरुद्धको खोपको दुबै डोज लगाएका थिए ।
हाल सम्म मधेश प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीमा १५९, सिरहा १३५, धनुषा १३२, महोत्तरी ९१, सर्लाही ९३, रौतहट १२८,बारा १८०, पर्सा १३२ र एक भारतीय नागरिक गरि एक हजार ५१ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृतक मध्ये पुरुष ७६२ र महिला २८९ रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
महोत्तरी । नेकपा एमाले मधेश प्रदेशले लोसपासँग गठबन्धनको लागी आन्तरिक संवाद भइरहेको बताएको छ । आन्तरिक छलफलका क्रममा लोसपासँग गठबन्धनको सम्भावना बढेको मधेश प्रदेश नेकपा एमालेले जनाएको छ । सकेसम्म सत्तारुढ
मधेश प्रदेश सभाको अधिवेशन मध्यरातबाट अन्त्य हुँदै
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाको ८औँ अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदै छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर मंगलबार राति
मधेश प्रदेश- गठबन्धनमा उत्पन्न आशंकाहरू होला त समाप्त ?
महोत्तरी । प्रदेशका शीर्ष नेताहरू अहिले महोत्तरीको गुन्ज होटलमा छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनको बिषयमा बनिरहेको अल्लमल्ललाई ठोस निर्णयसहित निष्कर्षमा पुर्‍याउने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । सोमवार मात्रै गठबन्धनका दलहरूको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई
मधेश प्रदेशमा गठबन्धन बैठक जारी, चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल
जनकपुरधाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल गर्न मधेश प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धन दलको प्रदेशस्तरीय बैठक बसिरहेको छ । बर्दिबासमा जारी बैठक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत